Khaatumo oo Puntland ku eedaysay dagaalo shalay iyo maanta ka dhacay gobolka Sool (Dhegeyso) – Radio Daljir
Nofeembar 28, 2013 3:53 b 0
Buuhoodle, November 28, 2013 – Xaalad kacsanaan ah ayaa laga dareemayaa degmada Taleex ee gobolka Sool, xili habeennimadii xalay uu halkaas gaaray madaxweyne ku xigeenka Puntland Gen. Cabdisamad Cali Shire iyo wefdi uu hugaaminayo.
Radio Daljir oo warar ka heshay degmada ayaa sheegaya inay halkaas ka bexeen ciidamo uu hugaaminayo Maxamed Yuusuf Indha-sheel oo ah madaxweynaha Khaatumo, waxaana ay gaareen magaalada Sarmaanyo ee isla Sool.
Dagaal kooban ayaa saaka degmada Taleex ku ?dhexmaray ciidamo ka tirsan kuwa Puntland iyo kuwa kale oo daacad u ah maamulka Khaatumo sida wararku sheegayaan, lama ogga khasaaraha ka dhashay dagaalkaas.
Masuuliyiinta maamulka Khaatumo ayaa dagaalkaas ku eedeyey dowladda Puntland oo ay ku tilmaameen in ay qas iyo degnaansho la?aan ka waddo qaybo ka mid ah gobolka Sool, Carab Xasan Fadal oo ah duqa Buuhoodle ee maamulka Khaatumo ayaa shir jaraa?id oo uu maanta qabtay hadalkaas ku sheegay.
Masuuliyiinta Buuhoodle ee maamulka Khaatumo waxay si kulul u canbaareeyeen dagaaladii shalay iyo maanta ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Sool, waxay ku cel-celiyeen madaxdii maanta ka hadlay Buuhoodle in dagaalkaas ay Puntland abbaabulayso.
Dowladda Puntland dhinaceeda kama aysan hadlin wararka ka soo baxayey gobolka Sool ilaa shalay.
?Dhegeyso: hadalka duqa degmada Buuhoodle ee maamulkah Khaatumo Carab Xasan Fadal
Urrurada bulshada iyo maamulka Gaurdafu oo horumarinta adeegyada muhiimka ka shiray (Dhegeyso)